टाइगर रिसोर्ट भैरहवा – राज्य र कानुनलाई ठाडो चुनौती, सयौ नेपालीको जीवन सँग खेलवाड ! - सिम्रिक खबर
टाइगर रिसोर्ट भैरहवा – राज्य र कानुनलाई ठाडो चुनौती, सयौ नेपालीको जीवन सँग खेलवाड !
काठमाडौँ । अस्ट्रेलियन सिलभर हेरिटेज कम्पनीले राज्यको कानुन, ऐनको व्यापक उपहास गरेको छ । यस कम्पनी मातहतमा रहेको एस.एच.एल. मेनेजमेन्ट सभिर्सेस अन्तर्गत सञ्चालित रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नंं.१३ मा टाईगर पार्टी प्यालेस एण्ड रिसोर्ट, टाईगर प्यालेस क्यासिनो, र काठमाडौँको मिलिनियर्स क्लब एण्ड क्यासिनो काठमाडौँका कर्मचारी माथि व्यापक अन्याय गरेको हो । श्रम ऐन २०७४ ले गरेका व्यवस्थाहरुलाई कुल्चिएर देशको कानुन र राज्यका नियमहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै सयौ कामदारको जीवनमा माथि नै खेलवाड गरेको छ ।
श्रम ऐन २०७४ को दफा १४५ मा कामदार हटाउने विषयमा स्पष्ट प्रावधान बनाइएको छ । उक्त ऐनमा प्रतिष्ठानमा कुनै आर्थिक समस्या भएमा वा एकभन्दा बढी प्रतिष्ठानहरु गाभिएको खण्डमा वा अन्य कुनै कारणले सेवा बन्द गर्नुपर्ने भएको खण्डमा रोजगारदाताले श्रमिक कटौती गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । कामदार हटाउनुअघि उनीहरुलाई कम्तीमा ३० दिन अघि कारण सहितको जानकारी आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई गराउनुपर्दछ । त्यसपछि युनियन सँग कर्मचारी कतौटिको विषयमा छलफल गरी शुरुमा विदेशका कर्मचारी कटौती गर्न पाइन्छ । त्यसपछि खराब आँचरण भएका कर्मचारी, त्यसपछि कार्यसम्पादन कमजोर भएका कर्मचारीलाई कटौती गर्न पाईन्छ । त्यसपछि मात्र सबैभन्दा पछि नियुक्त भएको कर्मचारीलाई निष्काशन गर्ने अधिकार कम्पनीलाई रहेको छ ।
तर यो व्यवस्थालाई चिम्लेर रिसोर्टले एकैपटक भदौ २४ गते ३९३ जना कर्मचारीलाई पूर्व जानकारी नदिई इमेल मार्फत कामबाट हटाएको जानकारी गराएको छ । त्यसैगरी काठमाडौँ साग्रिाला होटल परिसरमा रहेको मिलिनियर्स क्लब एन्ड क्यासिनोका ३० गरी एकैपटक ४२३ जना कर्मचारी निकालेको हो । रिसोर्टले स्वदेशी कर्मचारी र कामदारहरुलाई एक इमेल पठाई २ वर्ष करार अवधि सकिएको र कोरोना भाईरसका कारण गरिएको लकडाउनले व्यवसाय धरासायी वनेको भन्ने व्यहोराको इमेल लेखी सबै कर्मचारी र कामदारहरुलाई काममा नआउन भनेको हो ।
अचम्मको कुरा त के छ भने, श्रम ऐनको दफा १४५ मा व्यवस्था गरिएबमोजिम पूर्व जानकारी नदिई ती कामदारलाई निकालिएको छ । हटाउने कुरामा पनि पहिलो प्राथमिकता विदेशी कामदार पर्छन । तर ९ जना विदेशी कामदार छोडेर बाँकी नेपाली कामदार निकालिएको छ । केही दिनमा फेरी अन्य कर्मचारी पनि निकाल्न लागेको सूचना हामीलाई प्राप्त भएको छ । उक्त रिसोर्टमा विदेशी कर्मचारी ९ जना विदेशी कर्मचारी रहेको छ । त्यसैमाथि श्रम स्विकृति नभएका ७ जना कर्मचारी छन् । जसको वर्क परमिट पनि छैन । किनकी ती व्यक्तिहरु पर्यटक भिषामा नेपाल छिरेका हुन् ।
लकडाउन हुनु अघि २१ मार्च अर्थात चैत्र ८ गते आधिकारिक ट्रेड युनियन सँगै कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत तलव दिएर काममा राख्ने सहमति भएको थियो । तर १३ अगष्टमा रिसोर्टले आधिकारीक रुपमा स्टाफ काट्ने बतायो । ट्रेड युनियनले ती कर्मचारीलाई परिस्थिती सहज भएसम्म विदामा राख्न तर जागिरबाट ननिकाल्न भनेको थियो । युनियनका अध्यक्ष रोशन गुरुङले आफुहरुले लकडाउन खुलेपछि पनि केही समय कर्मचारीलाई आधा तलव खुवाएर काम गराउन सकिने बताएको जानकारी दिए । त्यसमा कर्मचारी पनि तयार थिए । तर खर्च धान्न सक्दैनौ भन्ने वहानावाजीमा सयौ कामदारको जागिर खोसिएको छ, र उनीहरुको जीवन माथि नै खेलवाड गरिएको छ । अर्काे कुरा रिसोर्टले कामदार निकाल्नुमा पनि आर्थिक समस्या नभएको स्रोत बताउँछ । अहिले त्यहा १० हजार डलर सम्म तलव खाने विदेशी कामदार छन् । ती कर्मचारीलाई कामबाट हटाइएको छैन । तर बिस तीस हजार तलब खाने सोझा जनताको छातीमा लात हान्न रिसोर्टले हात कमाएन । बरु श्रम ऐनले भने बमोजिम हजारौ तलव खुवाउने कर्मचारीलाई कटौती गरेको खण्डमा नेपाली कामदारहरुको पेट पालिने थियो ।
श्रम स्विकृति विनै काम गरिरहेका एक जना अष्ट्रेलियाका कामदार हुन इमि बुनेल । बुनेल नेपाल कन्ट्री हेडका रूपमा बिना श्रम स्वीकृति गैर कानुनी रुपमा कार्यरत छन् । त्यसैगरी अर्का केभिन जोन, विलकक्स, जेनालिन मदम्बा, अर्फान्डो मोरन ओटरा नाम गरेका कर्मचारीको पनि वर्क परमिट जनवरी ९ मा सकिएको छ । तर अहिले सम्म काम गरिरहेको छ । नेपालको कानुनले वर्क परमिट सकिएपनि विदेशी कर्मचारीलाई काम गर्ने अनुमति दिएको छैन । यहाँ मात्र नभएर विश्वका हरेक देशमा यही लागू हुन्छ । तर कानुनको आँखा छल्दै रिसोर्टले अरु देशका नागरिकलाई पोसिरहेको छ ।
केभिन जोन बिदेशी नागरिक यो भन्दा पहिले पनि विवादित पात्र हुन्। उनको वर्क परमिट २०२० जनवरी मा सकिएको छ । निशा बराल लगायत १० जना कर्मारीहरू लाई युनियन गतिविधिमा लागेको भनी उनीहरूलाई काठमाडौँ क्यासिनो देखी भैरहवामा सरुवा गराएका थिए । कर्मचारी माथि यस प्रकारका दुख दिने काम पनि यि ब्यक्तिबाट पटकपटक हुने गरेका छन् । यही विषयमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले श्रम विभागमा पत्र लेख्दै यी ब्यक्तिहरुलाई वर्क परमिट नदिन समेत माग गरेको अध्यक्ष गुरुङ्गले बताए । रिसोर्टले कामबाट हटाएका कर्मचारीहरुमा आधिकारिक ट्रेड युनियमका सदस्य समेत छन् । उनीहरुलाई विभिन्न किसीमका गाली वेइज्जती पनि ति विदेशीहरुले गर्ने गरेका छन् ।
प्रशासनको उदासिनता र निरिहपन – यस विषयमा देशकोे प्रशासनको साँठगाँठ देखिएको स्रोत बताउँछ । आफ्ना देशका नागरिकलाई कानुन विपरीत देशमा बसेको विदेशी ब्यक्तिले श्रमशोषण गरीरहँदा प्रशासन पनि खरो रुपमा उत्रन सकेको छैन । घटनाबारे थाहा पाएसँगै अध्यागमन विभागको टोली छापा मार्न रिसोर्ट पुगेको थियो । तर उक्त कुरा थाहा पाएसँगै ती विदेशी नागरिक केभिन रातारात फरार भएका थिए । त्यतिमात्र नभएर छापा मार्न गएको अध्यागमन विभागको टोलीलाई गेटबाट भित्र छिर्न नदिइएको भन्दै टोली फर्केको थियो । यसमा केभिनको राजनीतिक साँठगाठ भएकै कारण त्यहाँबाट फरार भएको स्रोतको दावी छ । यस विषयमा कारवाहीको माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा उजुरी पनि गरिएको छ । तर कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउनुको सट्टा मन्त्रालयका अधिकारी कानमा तेल हालेर बसेका छन् । यस विषयमा कामबाट निकालिएका कर्मचारीहरुले अधिकार माग गर्दे आन्दोलन पनि गरिरहेका छन् । कर्मचारीहरु करिब तिन बर्ष देखी काममा रहेका छन् । ती कर्मचारीहरुलाई स्थायी कर्मचारी हुन् । त्यसकारण पनि उनीहरुलाई जवरजस्ती कामबाट निकाल्न मिल्दैन । त्यसमाथि काठमाडौँको मिलिनियर्स क्यासिनोमा स्थायी रुपमा कर्मचारी राखेको देखाउने तर भैरहवामा रिसोर्टका कर्मचारीहरुलाई अस्थायीको दर्जा दिने काम कम्पनीले गरेको छ । युनियनका अध्यक्ष गुरुङ्गले यसरी कानुनलाई तोडेर मनलाग्दी गर्ने ब्यक्ति तथा कम्पनी माथि कानुन बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने, “जसरी श्रम ऐनको धज्जी उडाएर कानुन मिच्दै स्वदेशी कर्मचारी हटाइ विदेशी कर्मचारी पोसिएको छ, यस प्रवृतिको कारवाही गरि अन्यायमा परेका कर्मचारीलाई न्याय दिइनुपर्दछ” । उनले यस विषयमा गहिरो छानविन हुनुपर्ने आफुहरुको माग रहेको बताए ।